J Zuma: State of the Nation Address (isiZulu)
Inkulumo Echaza Isimo Sezwe Ithulwa Umhlonishwa JG Zuma, uMongameli WeRiphabliki YaseNingizimu Afrika, Ukuhlala Ngokuhlanganyela Kwezindlu Zombili ZePhalamende, eKapa
3 Nhlangulana 2009
Sihlalo woMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe;
IPhini likaSomlomo Wesigungu Sikazwelonke nePhini likaSiHlalo woMkhandlu Kazwelonke Wezifundazwe;
IPhini likaMongameli weRiphabliki, Kgalema Motlanthe;
UMongameli Waphambilini weRiphabliki, Thabo Mbeki;
Ingqalabutho yethu, uMongameli Wokuqala weNingizimu Afrika Yentando Yeningi, Isithwalandwe uNelson Rolihlahla Mandela;
Amaphini oMongameli Baphambilini;
Ondunankulu Abahloniphekile noSomlomo Bezishayamthetho Zezifundazwe zethu;
Malungu ahloniphekile Ezobulungiswa;
Sihlalo weNhlangano Yohulumeni Basemakhaya yaseNingizimu Afrika, izimeya kanye nabaholi ohlelweni lwethu lohulumeni basekhaya;
Sihlalo weNdlu kaZwelonke yaMakhosi Endabuko namakhosi endabuko ahloniphekile;
Zinhloko Zezikhungo zikaHulumeni Ezisekela iNtando Yeningi; Mphathi weBhangengondla;
Baholi bezenkolo; Baqondisi-Jikelele nabaholi bezikhungo zikahulumeni;
Mongameli wePhalamende lase-Afrika, Umhlonishwa Idriss Endele Moussa;
Amanxusa Ahloniphekile, kanye noKhomishina Abakhulu;
Zimenywa ezihloniphekile, maqabane kanye nabangani;
Zakhamizi zaseNingizimu Afrika,
Dumelang, Avuxeni, Molweni, Ngomhlaka 22 kuMbasa, izigidi ngezigidi zezakhamizi zaseNingizimu Afrika zaphuma ngobuningi bazo zaya kovota. Basebenzisa ilungelo labo lentando yeningi beqhutshwa isifiso sokuguqula izimpilo zabo zibe ngcono.
Ngobuningi babo, baqinisekisa ukuthi ngokusebenzisana singenza okuningi ukulwa nobubha kanye nokwakhwa impilo engcono yawo wonke umuntu. Babegqugquzelwa umbono womphakathi owodwa, iNingizimu Afrika okungeyabantu bonke abahlala kuyona, isizwe esibumbene ngokwahlukahlukana kwaso, abantu abasebenza ngokubambisana besebenzela izinto ezinhle zawo wonke umuntu.
Sizizwa sihloniphekile ngokuthola leli gunya elingathandabuzeki okhethweni, silinikwa abantu bezwe lethu, abakhethe uhulumeni wabo ngendlela engangabazeki nakancane. Malungu Ahloniphekile,
Eminyakeni edlule isizwe sethu besibhekene nesikhathi esiyinselelo enkulu.
Sikwazile ukunqoba lezi zinkinga kalula futhi nangesizotha ngenxa yokuthi sinohulumeni wentando yeningi owakhelwe phezu koMthethosisekelo osebenza kahle kanye nezikhungo zikahulumeni ezinohlonze. Umcimbi wanamhlanje ngowokuthokozela lokho okwenza intando yeningi isebenze. Futhi wumbungazo wesiko lethu lenqubekela phambili kanye nokusebenza ngokubambisana.
Lokhu kufakazelwa ukuba khona kwengqalabutho yethu uMadiba, owabeka isisekelo sempumelelo yezwe lethu, kanye nalowo owayenguMongameli uThabo Mbeki, owakhela phezu kwaleso sisekelo.
Le nqubekela phambili ibonakala futhi ngokuthi lowo owayenguMongameli uKgalema Motlanthe manje useyiPhini likaMongameli weRiphabliki, emva kokudlulisela ukuphatha ngendlela engenazihibe, okusenza sibe izwe elehlukile ngezindlela eziningi.
Zakhamizi zaseNingizimu Afrika, Njengoba nazi, ukulwa nobubha kusewumsebenzi omkhulu uhulumeni wethu ozogxila kuwona.
Ngomhlaka 9 kuNhlaba, ngenkathi kugcotshwa uMongameli, senza isethembiso kubantu bethu nomhlaba jikelele ukuthi:
"Uma nje kusenezakhamizi zaseNingizimu Afrika ezibulawa izifo ezilaphekayo; uma nje kusenabasebenzi abakuthola kunzima ukondla imindeni yabo futhi abanobunzima bokuthola imisebenzi;
Uma nje kusenemiphakathi engenawo amanzi ahlanzekile, izindlu ezisezingeni elifanele kanye nezindlu zangasese;
Uma nje kusenabantu basemakhaya abangakwazi ukuziphilisa ngomhlaba abahlala kuwona;
Uma nje kusenabantu besifazane ababhekene nokucwaswa, ukuxhashazwa kanye nokuhlukunyezwa;
Uma nje kusenezingane ezingenazo izindlela noma ithuba lokuthola imfundo esezingeni elifanele;
Ngeke siphumule, akumele nakancane siphazame, embhidlangweni wethu wokuqeda ububha.
Ukuze sifeze lawa maphupho, uhulumeni usehlonze izindawo eziyishumi ezidinga ukubekwa eqhulwini, eziyingxenye yoHlaka Lwamasu Okusebenza Esikhathini Esimaphakathi kuka 2009 kuya ku 2014.
Lolu hlelo luzoqala ukusebenza ngaphansi kwezimo zomnotho ezinzima.
Ngonyaka odlule kubonakale umnotho womhlaba ungena enkingeni engakaze ibonwe emashumini eminyaka esikhathini esifushane esidlulile. Yize iNingizimu Afrika ingakhahlamezekanga ngendlela amanye amazwe akhahlamezeke ngayo, umthelela walokho usubonakala ngokusobala emnothweni wethu. Umnotho wethu usuphelelwa amandla.
Kubaluleke kakhulu manje kunakuqala ukuthi sisebenze ngokubambisana ohlelweni olufanayo lokubhekana nale nkinga. Sithatha njengengxathu lethu lokuqala Uhlaka lweNingizimu Afrika lokubhekana nenkinga yomnotho womhlaba, okwavunyelwana ngalo phakathi kukahulumeni, abasebenzi kanye nabamabhizinisi ngoNhlolanja kulo nyaka. Kufanele sithathe izinyathelo manje ukuze sinciphise umthelela wale nkinga kulabo abahlwempu kakhulu.
Sesiqalile ukuthatha izinyathelo zokunciphisa ukulahleka kwemisebenzi. Kunokuvumelana phakathi kwesibambisene nabo emphakathini kanye nohulumeni ngokuqaliswa kokuqeqeshwa kwalabo abalahlekelwe imisebenzi.
Abasebenzi abebezobhekana nokudilizwa ngenxa yokufadalala komnotho bazoqhubeka emisebenzini yabo isikhashana esithile baphinde baqeqeshelwe amakhono kabusha. Izingxoxo mayelana nemininingwane yokwenza lokhu ziyaqhubeka phakathi kwesibambisene nabo emphakathini kanye nezikhungo ezizothinteka ngenxa yalolu hlelo.
Sizoweseka umsebenzi weKhomishana Yokubuyisana, Ukuxazulula Nokwahlulela, ukusiza abaqashi nabasebenzi ekutholeni ezinye izindlela zokuxazulula izinkinga zokudilizwa kwabasebenzi ngokusebenzisa izinhlelo zomthetho ezifanele.
Kuze kube manje, okhomishana beKhomishana Yokubuyisana, Ukuxazulula Nokwahlulela, sebesindise imisebenzi engaphezu kwezinkulungwane ezine ngezinhlelo zokulamula futhi benikeza nezeluleko nosizo kubasebenzi abadiliziwe. Isikhungo sokuThuthukiswa Kwezimboni siqhamuke nohlelo lokuxhasa ngezimali izinkampani ezikhahlamezekile. Sizophinde senze isiqiniseko sokuthi uhulumeni uthenga izimpahla eziningi kanye nezinsiza zakuleli, ngaphandle kokubukela phansi ukuncintisana komhlaba jikelele noma ukukhuphula amanani ambe eqolo ngaphezu kwalokho okwamukelekile.
Ngokwakhela phezu kwezimpumelelo zethu zenqubomgomo yokungenelela ezimbonini, Uhlelo Lokusebenza Lwenqubomgomo Yezimboni olwenziwe ngcono luzothuthukiswa. Imikhakha ehamba phambili ehlonziwe kuzoba owezimoto, owamakhemikhali, owokwakhiwa kwensimbi, ezokuvakasha, owezingubo kanye nendwangu kanye nowezamahlathi. Ngaphezu kwalokhu, kuzogxilwa kakhulu futhi emisebenzini ehlinzekwayo, ekukhiqizeni ngamanani amancane kanye nezokwakha uma sibala okumbalwa nje, embhidlangweni wethu wokwakha imisebenzi esezingeni elifanele. Njengengxenye yesiGaba sesibili Sohlelo Olunwetshisiwe Lwemisebenzi Kahulumeni Emiphakathini, uHlelo Lwemisebenzi Yomphakathi, luzosheshiswa.
Lolu hlelo lunikeza izinga eliphansi kunawo wonke abekiwe ithuba lokusebenza kulabo abafuna umsebenzi , ngakolunye uhlangothi luthuthukisa izimpilo zomphakathi. Ukufadalala komnotho kuzoba nomthelela esivininini izwe lethu elingabhekana ngaso nezinselelo zomphakathi kanye nezomnotho esibhekene nazo. Kodwa lokhu ngeke kuguqule indlela yokuthuthuka kwethu.
Izinto eziseqhulwini kwinqubomgomo esizihlonzile , kanye nezinhlelo esizibeke phambi kwalabo abasikhethile, zizohlala ziwumongo wohlelo lwalo hulumeni. Ngomoya wokuzwana womphakathi waseNingizimu Afrika, asibambaneni ngezandla ukuthola izisombululo ngokubambisana. Sesifikile isikhathi sokusebenza ngokuzikhandla okukhulu.
Uhulumeni wethu uzobheka phambili, hhayi emuva!
Izinyathelo eziqagulwe ohlelweni lwethu loHlaka Lwamasu Okusebenza Esikhathini Esimamaphakathi zizobhekisisa izinkinga ezilethwa ukufadalala komnotho. Ukwehla komnotho akufanele kusenze siguqule izinhlelo zethu. Kunalokho, kufanele kusikhuthaze ukuthi siqalise lezi zinhlelo ngokushesha nangokuzimisela.
Uhlaka luzogxila ezintweni esizibeke eqhulwini eziyi-10. Siyazibophezela ukuthi ngokusebenza ngokubambisana sizosheshisa ukukhula komnotho bese siguqula umnotho ukuze sakhe imisebenzi esezingeni elifanele kanye nezimpilo ezingcono.
Sizoqalisa uhlelo olukhulu lokwakha ingqalasizinda yezomnotho kanye neyenhlalo yomphakathi. Sizoqhamuka futhi siqalise isu eliphelele lokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya oluhambisana nokuhlelwa kabusha kwezomhlaba kanye nezolimo nokutholakala kokudla okwanele.
Sizoqinisa isizinda samakhono kanye nesabasebenzi. Sizokwenza ngcono isimo sezempilo sazo zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika. Ngokusebenza ndawonye nazo zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika , sizoyiqinisa impi yokulwa nobugebengu nenkohlakalo. Sizokwakha imiphakathi ebumbene, enakekelayo futhi enohlonze.
Ngokusebenza ngokubambisana nezwekazi lase-Afrika kanye nomhlaba wonke, sizolwela inqubekela phambili ye-Afrika kanye nokubambisana komhlaba okwenziwe ngcono. Sizoqinisekisa ukusetshenziswa nokuphathwa kahle kwezinsiza.
Futhi, ngokusebenzisana nabantu futhi silekelelwa abasebenzi bethu bakahulumeni, sizokwakha izwe elithuthukayo, siphucule ukuhanjiswa kwezidingo kubantu siphinde siqinise izikhungo zentando yeningi.
Kuyinjabulo nentokozo ukuveza kafushane imininingwane ebalulekile mayelana nohlelo lwethu lokusebenza.
Ukwakhiwa kwemisebenzi esezingeni elifanele kuzoba ngumgogodla wemigomo yethu yezomnotho. Futhi sizogxila ekuheheni abatshali bezimali kanye nasezinhlelweni zokwakha imisebenzi.
Ngokuhambisana nokuzibophezela kwethu, fanele siqhubekele phambili nokugqugquzela umnotho ohlomulisa bonke abantu. Mayelana nalokhu-ke, sizosebenzisa amandla kahulumeni afana nokuthenga, ukukhishwa kwamalayisense nokuxhasa ngezimali ukusiza amabhizinisi asafufusa kanye nokugqugquzela ukuqaliswa kwezinqubo mgomo zoHlelo Olunabile Lokuthuthukiswa Kwabamnyama Kwezomnotho kanye nohlelo lukasenza ngakhona. Ukuqaliswa kokusebenza kwalolu hlelo kuzokwenziwa ngoba sibona isidingo sokuthi kulungiswe ukungalingani kwangaphambilini. Lolu guquko luzokwenziwa kusekelwa abesifazane, intsha kanye nabantu abakhubazekile. Sizokwehlisa umthwalo wendlela esilawula ngayo amabhizinisi amancane. Lolu daba lokucindezelwa imithetho seluphakanyiswe izimboni ezikulomkhakha amahlandla amaningana. Njengenye indlela yokungenelela ekwakheni isimo esingcono sokutshalwa kwezimali, uhulumeni uzokwakha uhlelo olulodwa oludidiyelwe lokubhalisa amabhizinisi.
Lokhu kuzokwenza ngcono usizo olunikezwa amakhasimende futhi lunciphise nezindleko zokuba nebhizinisi eNingizimu Afrika. Okunye okubalulekile ngomkhakhaso wethu wokwakha amathuba emisebenzi uHlelo Olunwetshisiwe Lwemisebenzi kaHulumeni Emiphakathini. Indima esasizibekele yona yokuvula amathuba imisebenzi eyisigidi sesiyiphothulile.
Isigaba sesibili salolu hlelo sihlose ukuvula amathuba emisebenzi ayizigidi ezine ngonyaka ka 2014. Kusukela manje kuze kushaye uZibandlela ku2009, sihlela ukuvula amathuba emisebenzi ayi-500 000. Nakuba sakha isimo esihle semisebenzi kanye namathuba amabhizinisi, uhulumeni uyabona ukuthi ezinye zezakhamizi zizoqhubeka nokudinga usizo lukahulumeni. Izibonelelo zikahulumeni ziseyindlela engcono yokuqeda ububha. Kusukela ngomhlaka 31 kuNdasa 2009, bangaphezu kwezigidi eziyi-13 abantu abathole isibonelelo sikahulumeni, kuthi abangaphezu kwezigidi eziyisishiyagalombili kulabo kube izingane.
Siyazi ukuthi kunesidingo sokuxhumanisa izibonelelo zikahulumeni kanye nezinhlelo zemisebenzi kanye nomnotho ukuze sigqugquzele ukuzimela kulabo abakwaziyo ukuzenzela izinto ngemizimba yabo. Okubaluleke kakhulu ngalesi sikhathi, ukuthi omakhelwane kufanele basizane.
Manje isikhathi sokuthi sibumbane. Asisizane njengomakhelwane. Asivumelane ukuthi akufanele kube khona ingane elala ilambile ngenxa yokuthi abazali bayo abasebenzi. Uma sihlangana futhi sisebenzisana, singenza okuningi.
Zihambeli zethu ezihloniphekile, njengengxenye yesu lethu lesibili lezinto ezibekwe eqhulwini sizoqhubeka nohlelo lwethu lokwakha ingqalasizinda yomnotho kanye neyenhlalo yomphakathi. Umkhakha osanda kusungulwa kahulumeni Wokuthuthukiswa Kwengqalasizinda uzoqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa kwezigidigidi ezingama-R787 kwingqalasizinda njengoba kufakwe esabelwenimali ekuqaleni kwalo nyaka kuhlelwe kahle futhi kuyaqaliswa.
Le mali ifaka phakathi isabelo sohlelo lokwakha izikole, ezokuthutha umphakathi kubandakanya uhlelo lwamabhasi asheshayo, ezezindlu, amanzi kanye nezindlu zangasese. Olunye lwezinhlelo zethu ezinkulu okutshalwe kuzona izimali, Umqhudelwano Wendebe Yomhlaba Kanobhutshuzwayo yeFIFA ka-2010. Njengohulumeni kanye nesizwe sonkana, sizibophezele ukuthi Indebe Yomhlaba izoshiya ukhondolo lokuziqhenya; abantwana bethu kanye nomphakathi bazohlomula iminyaka eminingi ezayo ngenxa yalokhu.
Sisasebenza kahle ukuhlangabezana nezibophezelo zethu futhi sizimisele ukunikeza umhlaba Indebe Yomhlaba engakaze ibonakale. Senza onke amalungiselelo ukwenza Indebe Yesivumelwano, eqala ngomhlaka 14 kuNhlangulana, ibe yimpumelelo enkulu. Ngombasa kulo nyaka, ngenza isethembiso kubaholi bemboni yamatekisi ukuthi zizomiswa izingxoxo mayelana nokusetshenziswa koHlelo Lwamabhasi Asheshayo kuze kwedlule ukhetho.
Sazibophezela ukunikeza isikhathi esanele ukubhekana nezikhalazo zale mboni ngendlela efanele. Mhla ziyi-11 kuNhlangulana uNgqongqoshe Wezokuthutha uzoqala kabusha izingxoxo nemboni yamatekisi. Umhlangano uzoqala ngochungechunge lwezingxoxo nalabo abathintwe uHlelo Lwamabhasi Asheshayo. Sinethemba lokuthi izinkinga ezingakaxazululeki kuzobhekwana nazo ngendlela ezokwenelisa wonke umuntu othintekayo.
Lokhu kuzofaka nodaba olubalulekile lokuthi ngabe abathintekayo bazohlomula kanjani kulolu hlelo. Malungu Ahloniphekile,
Okunye okwenziwayo okuzofukula Indebe Yomhlaba ukufakwa kwengqalasizinda yohlelo lokusakaza ngendlela ekhombisa izithombe zikamabonakude ezicace kakhulu kanye nemibhoshongo yokusakaza yesimanjemanje. Kukonke, sizoqinisekisa ukuthi izindleko zokuxhumana ziyancishiswa ngohlelo oseluqalile lokwandisa amandla okuxhumana.
Kufanele senze isiqiniseko ukuthi izindawo zasemakhaya asizishiyi ngaphandle kulezi zinhlelo ezithokozisayo. Njengengxenye yokuthuthukiswa kwengqalasizinda, sizohlinzeka ngezindlu ezisezindaweni ezifanele futhi ezingabizi kanye nezindawo zokuhlala ezihloniphekile.
Sizoqhubeka sisusela ekuqondeni ukuthi ukuhlaliswa kwabantu akukhona ukwakhelwa kwabantu izindlu nje kuphela. Lokhu kuphathelene nokuguqula amadolobha namadolobhana nokwakha imiphakathi ebumbene, eqinile nenakekelayo, efinyelela kalula emsebenzini kanye nesezikhungweni zomphakathi kubandakanya izindawo zezemidlalo kanye nezokungcebeleka.
Kulo moya wokubambisana, sizosebenzisana nePhalamende ukusheshisa ukuphasiswa KoMthethosivivinywa Wokulawulwa Kokusetshenziswa Komhlaba. Ngokusebenzisana nabantu bethu basezindaweni zasemakhaya, sizoqinisekisa ukuthi isu lethu eliphelele lokuthuthukisa ezasemakhaya oluxhumene nokuhlelwa kabusha kwezomhlaba kanye nezokulima kanye nokutholakala kokudla okwanele, okuyinto yethu yesithathu eseqhulwini.
Ngithanda ukuthatha lelithuba ukudlulisa amazwi okudabuka okukhulu emndenini wePhini likaNgqongqoshe Wezolimo uDirk du Toit, odlule emhlabeni kulona leli sonto. Igalelo lakhe lizokhumbuleka kakhulu. Abantu basemakhaya nabo banelungelo lokuba nogesi namanzi, izindlu zangasese ezigijima amanzi, imigwaqo, izindawo zokuqeda isizungu nezemidlalo kanye nezindawo zokuthenga eziphucukile njengasemadolobheni.
Nabo banelungelo lokusizwa kwezolimo ukuze bazitshalele imifino nokunye, bafuye nemfuyo bakwazi ukuziphilisa. Sizimisele ukuwuqala lomkhankaso wokwakha izingqalasizinda ezindaweni zasemakhaya. Uma sibambisene nezakhamizi, amakhosi, amakhansela nezinduna siyokwazi ukuwusheshisa lomsebenzi.
Ngokusebenzisana Singenza Okuningi.
Somlomo Ohloniphekile kanye noSihlalo,
Njengoba sifunde izifundo ezibalulekile ezinhlelweni zaphambilini zokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya, sikhethe umasipala waseGiyani eLimpopo njengohlelo lokuqala lokuhlola lomkhankaso. Kulezi zinhlelo kuzovela izifundo ezizosiza izwe lonke.
Phezu kwalokhu, sizosebenza ngohlelo lokuvuselelwa kwamadolobha asemakhaya ngezibonelelo ezifana noHlelo Lwesibonelelo Sokuthuthukisa Izindawo Zabahlali. Ngale ndlela izindawo ezakhelene namadolobha zizohlomula ekufukulweni komnotho. Ngazo zonke lezi zinhlelo zokungenelela, sesikulungele ukuguqula ukubukeka kwezindawo zasemakhaya ezweni lethu.
Imfundo izobe iyinto eseqhulwini kule minyaka emihlanu ezayo. Sifuna othisha, abafundi kanye nabazali besebenzisane nohulumeni ukuguqula izikole zethu zibe izikhungo ezichichima impumelelo.
Uhlelo Lokuthuthukiswa Kwezingane Zisesencane luzoqiniswa, ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ziningi izingane eziqala eBangeni R futhi kuphindaphindwe kabili inani lezingane ezineminyaka esukela kweyokuzalwa kuya kwemine ngaphambi konyaka ka 2014.
Sithanda ukugcizelela izinto okumele zenzeke noma kanjani. Othisha kufanele babe sesikoleni, emagunjini okufundela, bafike ngesikhathi esifanele, bafundise, bangawushayi indiva umsebenzi wabo futhi bangahlukumezi abafundi! Abafundi kufanele babe semagunjini okufundela, bafike ngesikhathi esifanele, bahloniphe othisha babo, bahloniphane futhi nabo njengabafundi, baphinde benze umsebenzi wabo wasekhaya.
Ukuze kwenziwe ngcono ukuphathwa kwezikole, ukuqeqeshwa ngokusemthethweni kuzoba umbandela obekiwe ekukhushulweni kothisha babe othisha-nhloko kanye nezinhloko zeminyango. Ngizohlangana nothisha-nhloko ukuze ngibonisane nabo ngombono wethu mayelana nokuvuselelwa kohlelo lwethu lwezemfundo.
Sizoqinisa imizamo yethu yokukhuthaza abafundi ukuthi baqede imfundo yabo yamabanga aphakeme. Umthamo esizibekele wona ukukhuphula izinga lokubhaliswa kwabafundi ezikoleni zamabanga aphakeme ngamaphesenti angama-95 ngo 2014. Sizama nokuthola izindlela ezinobuchule zokubuyisela ohlelweni lwezemfundo abafundi abashiya phakathi isikole bengakaziphothuli izifundo zabo, futhi sibanikeze nosizo abaludingayo.
Malungu ahloniphekile, sikhathazeke kabi ngemibiko yothisha abanukubeza ngokocansi baphinde bahlukumeze izingane, kakhulukazi amantombazane. Sizokwenza isiqiniseko ukuthi Imihlahlandlela Mayelana Nokunukubezwa Ngokocansi kanye Nodlame Ezikoleni Zikahulumeni iyasatshalaliswa, nokuthi abafundi kanye nothisha bayiqonda kahle futhi bayayilandela.
Siyothatha izinyathelo ezinqala futhi ezinzima kothisha abasebenzisa budedengu amandla abo ngokuba nobudlelwano bezocansi nezingane zesikole. Ukugqugquzela ukufunda okuqhubekayo, uHlelo Lwemfundo Yabadala kanye nokuQeqeshwa, iKha ri Gude luzoqiniswa.
Bantu bakithi, Malungu Ahloniphekile, Kufanele senze isiqiniseko sokuthi ukuqeqesha kanye nezinhlelo zokuthuthukiswa kwamakhono kuyabhekana nezidingo zomnotho. Umkhakha Wemfundo Esemazingeni Aphakeme kanye nokuQeqesha namakholishi awo angama-50 kanye nezikhungo zemfundo ephakeme eziyi-160 izwe lonke ziyoba izizinda eziphambili zokuqeqeshwa kokuthuthukiswa kwamakhono.
Sizokwenza ngcono ukutholakala kwemfundo ephakeme ezinganeni eziphuma emindenini ehlwempu kanye nokuqinisekisa uhlaka oluqinile lokuxhaswa ngezimali kwamanyuvesi.
Zakhamizi zakithi eNingizimu Afrika
Sikhathazeke kabi kakhulu ngokwehla kwezinga lokunakekelwa kwezempilo, okubhebhezelwa ukwanda komthwalo obangwa izifo kule minyaka eyishumi nanhlanu edlulile.
Sizibekele izinjongo zokuqhubeka nokwehlisa ukungalingani ekunikezweni kokunakekelwa ngezempilo, sandise umthamo wabasebenzi, sivuselele izibhedlela kanye nemitholampilo nokuqinisa impi yokulwa negciwane lesandulelangculazi kanye nengculazi, isifo sofuba kanye nezinye izifo.
Fanele sisebenze ngokubambisana ukwenza ngcono ukusetshenziswa kweqhinga eliphelele lokwelapha, ukuphatha kanye nokunakekelwa kwegciwane lesandulelangculazi kanye nengculazi ukuze sinciphise izinga lokutholakala kwengculazi elisha ngamaphesenti angama-50 ngonyaka ka 2011. Sifuna ukufinyelela kumaphesenti angama-80 walabo abadinga imishanguzo yengculazi ngo 2011. Sizoqala U mshuwalense Wezempilo Kazwelonke ngendlela yezigaba futhi nangendlela ekhuphukayo. Ukuze siqalise Umshuwalense Wezempilo Kazwelonke, kuzoqaliswa ngokushesha ukuvuselelwa kwezibhedlela nokuwumsebenzi ozokwenziwa ngokubambisana phakathi kwezinkampani ezizimele kanye nohulumeni.
Sizophinde sizifakele izibuko ngokushesha izindaba zokuholelwa kwabasebenzi bezempilo ukususa ungabazane ohlelweni lwethu lwezempilo. Ngokusebenzisana asenze okuningi ukugqugquzela ubuqotho bokunakekelwa ngezempilo, ngokuhambisana neziNhloso Zentuthuko Yekhulunyaka yeNhlangano yeZizwe zokunciphisa ububha ngenxenye ngo-2014.
Ngokusebenzisana fanele senze okuningi ukulwa nobugebengu. Inhloso yethu ukwakha uhlelo lwezobulungiswa olushintshiwe, oludidiyelwe, olwesimanje, olunabasebenzi nezinsiza ezanele futhi oluphethwe ngendlela efanele.
Kubaluleke kakhulu futhi ukwenza ngcono indlela izinkantolo zethu kanye nendlela abashushisi abasebenza ngayo nokwenza ngcono ezabaphenyi, ezokuhlola ngesayensi kanye nezobunhloli. Lo msebenzi uqalile khona maduze nje, kanti futhi uzokwenziwa ngomfutho kanye nentshisekelo entsha.
Phakathi kweminye yemisebenzi esizibekele yona ukuyenza ngokushesha ukuqinisekisa ukuthi sandisa abashushisi kanye nabasebenzi beBhodi elisisa Ngezobulungiswa. Sizokwenza okufanayo nasebaphenyini bamaphoyisa.
Sishintshe igama loMnyango othintekayo kulokhu lisuka ekubeni Ezokuphepha Nokuvikela kwala Owamaphoyisa ukugcizelela ukuthi sifuna amandla okusebenza ngempela emsebenzini wamaphoyisa. Lokhu kuzoba nomthelela ekuncishisweni kwamacala abucayi kanye nawodlame ngomthamo esizibekele wona ukusuka kumaphesenti ayi-7-10 ngonyaka.
Kuzophinda kugxilwe kakhulu ekulweni nobugebengu obuhleliwe, kanye nodlame olubhekiswe kubantu besifazane kanye nezingane.
Somlomo Ohloniphekile kanye noSihlalo, Ngesikhathi sithokozela ukutshalwa kwezimali kwemikhakha ezimele embonini yokuvikeleka, sizokwenza ngcono ukulawulwa kwale mboni. Phakathi kwezinhlelo eziseqhulwini, sizoqala uhlelo lokubumba Isikhungo Esiphethe Ezemingcele; sizoqinisa umfutho wethu wokulwa namacala e-inthanethi, ukutshontshwa komazizi, nokwenza ngcono izinhlelo emajele ethu ukunciphisa abantu abaphinde benze ubugebengu futhi. Bantu bakithi,
Ngifisa ukuveza ukweseka kwethu ekuqhubekeni kokushintsha ezobulungiswa.
Ushintsho luzolungisa izindaba ezibalulekile, njengokwenziwa ngcono kokuzimela kwezobulungiswa, nokugxilisa izinhlelo zangaphakathi zokuphendula kwezobulungiswa ngendlela obusebenza ngayo kanye nokuqiniseka ukuthi wonke umuntu uyafinyelela ngokuphelele kwezobulungiswa.
Impumelelo yayo lonke uhlelo lwentando yeningi incike ebudlelwaneni obuhle bokuhloniphana emoyeni wokubambisana phakathi kweSigungu Esiphezulu soNgqongqoshe, Isishayamthetho sikaZwelonke kanye Nezobulungiswa. Lokhu kubaluleke kakhulu entandweni yethu yeningi eyakhelwe ngaphezu komthethosisekelo.
Somlomo Ohloniphekile kanye noSihlalo, Sesiphinde kaningi sisho ukuzinikela kwethu ekulweni nokukhwabanisa eminyangweni kahulumeni. Sizongxila kakhulu ekulweni nokukhwananisa kanye nenkohlakalo ekuthengweni kwempahla kanye nasezinhlelweni zamathenda, ezicelweni zamalayisense okushayela, izibonelelo zikahulumeni, omazisi kanye nokwebiwa kwamadokodo amaphoyisa aqukethe amacala. Angigcizelele ukuthi sonke sinendima okufanele siyidlale kulempi yokulwa nobugebengu.
Fanele sibambe iqhaza Ezinhlanganweni Zomphakathi Eziqaphayo. Fanele siyeke ukuthenga izimpahla ezintshontshiwe ezigqugquzela ubugebengu. Fanele sibike ubugengu siphinde sisize amaphoyisa ngolwazi ukuze abophe abonayo. Ngalendlela, siyoqhubekela phambili ekubeni nompakathi ongenabo ubugebengu. Malunga ahloniphekile, kusukela ngo-1994 sizamile ukwakha umphakathi obumbene, ohlangene kusuka emlandweni wethu woqhekeko. Siyacelwa ukuba siqhubeke nalo msebenzi wokugqugquzela ubumbano ekwehlukaneni kwethu siphinde sithuthukise izinhlaka zamagugu okwabelwana ngazo, ezakhelwe emoyeni wobunye bomphakathi kanye nomphakathi onakekelayo.
Uhlaka lwethu lwamagugu okwabelwana ngawo fanele lusigqugquzele ukuthi sibe izakhamizi ezibamba iqhaza ekuvuselelweni kwezwe lethu. Fanele sakhe ukuzazisa kukazwelonke okunayo kanye nokuba isishabasheki sezwe. Fanele sakhe ukuzibophezela okufanayo ezweni lethu, kuMthethosisekelo kanye nasezimpawini zikazwelonke. Kulo moya, sizokwazisa Ngeculo Lesizwe, nefulegi lezwe lethu kanye nazo zonke izimpawu zikazwe lonke.
Izingane zethu, kusukela eminyakeni ephansi, fanele zifundiswe ukusekela nokuhlonipha uMthethosisekelo kanye nezimpawu zesizwe, nokuthi zazi ukuthi kusho ukuthini ukuba isakhamizi saseNingizimu Afrika. Sizoqinisekisa indlela kazwelonke efanayo yokushintsha amagama ezindawo kanye nawebalazwe. Lokhu fanele kunike ithuba lokubandakanya zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika ekwakheni ubuzwe obufaka wonke umuntu, nokungxilisa ukuqonda kwethu umlando wethu kanye namagugu.
Ezemidlalo ithuluzi elinamandla ekwakheni isizwe. Sisebenza ngokubambisana, fanele siseke amaqembu esizwe kusukela kuBafana Bafana, kuya kuma-Proteas kanye naMabhokobhoko; kusuka kuBanyana Banyana kuya Eqenjini Lesizwe Labakhubazekile. Amaqembu ethu angenza ngcono uma siweseka.
Ngivumeleni ngithathe leli thuba ukuhalalisela amaqembu ethu esizwe ngendlela adlale ngayo kule mpelasonto edlule, kanye nokunqoba izicoco ezintathu. Iqembu lesizwe labesifazane abadlala ibhola lomnqakiswano basenze saziqhenya ngokunqoba Indebe Yomqhudelwano Wamazwe Amathathu. Sihalaliselela aMabhokobhoko amaSevens ngokunqoba Umqhudelwano Wochungechunge Lomhlaba i-IRB Sevens-singakhohlwa amaBlue Blues anqobe owamanqamu eSuper 14 ngendlela enelisayo! Sithatha leli thuba ukufisela amabhokobhoko okumhlophe kuchungechunge lwemidlalo njengoba ezobhekana namaBritish kanye nama-Irish Lions. Kusobala ukuthi fanele sitshale kakhulu imali ekuthuthukisweni kwezemidlalo. Sizosheshisa uhlelo lokuvuselelwa kwezemidlalo ezikoleni siphinde siqinisekise ukuthi ziyingxenye yezifundo zezikole. Phezu kwalokho sizoqinisekisa ukwakhiwa kwezikhungo zezemidlalo ezindaweni zabahlwempu nokuyinto eseqhulwini.
Sazibophezela eminyakeni eminingi ukufaka isindla ekwakheni i-Afrika engcono kanye nomhlaba ongcono. Inhloso kahulumeni ehlosweni lwaphakathi nendawo ezayo ukuqinisekisa ukuthi ubudlelwano bethu bangaphandle bunomthelela ekwakheni indawo engcono ekuthuthukeni kanye nasekufukulweni komnotho.
Mayelana nalokhu sizoqhubeka ukubeka phambili izwekazi lase-Afrika ngokuqinisa iNhlangano yamaZwe ase-Afrika kanye nezinhlaka zayo, kanye nokubheka ngendlela ekhethekile ukuqaliswa Ubumbano Olusha Lokuthuthukiswa kwe-Afrika. Okunye okubalulekile, eduze nasekhaya, ukuqiniswa kokuhlanganiswa kwesifunda, kugxilwe kakhulu ekwenzeni ngcono ukuhlanganiswa kwezomnotho kanye nezepolitiki eNhlanganweni yamaZwe aseNingizimu ne-Afrika, kuya enhlosweni yeNhlangano yamaZwe ase-Afrika yohulumeni owodwa. Sizokwakha Isikhungo Sokubambisana kwezentuthuko eNingizimu Afrika esizogqugquzela ubudlelwano bezentuthuko kanye namanye amazwe asezwenikazi lase-Afrika.
INingizimu Afrika izoqhubeka nokusiza ekwakhiweni kanye nasekuthuthukisweni kwezwekazi lase-Afrika kakhulukazi ezindaweni ezikade zinezinxushunxushu. Sizoqhubeka ukugqugquzela isisombulo soxolo futhi esizohlala ekulweni kwezwe lasePalestine kanye nelakwa-Israel sigxile esixazululweni samazwe amabili.
Sizoyeseka imizamo yeNhlangano yamaZwe ase-Afrika kanye neNhlangano yamaZwe oMhlaba yoxolo ezwenikazi lase-Afrika kubandakanya eSharawi Arab Republic kanye nase Darfur eSudan.
Njengosihlalo weNhlangano yamaZwe aseNingizimu ne-Afrika kanye noMxhumanisi, sizobamba iqhaza ekugqugquzeleni ukulumeni wobumbano kuze kubanjwe ukhetho olukhululekile futhi olungenazihibe kwelaseZimbabwe.
Usizi lwabantu baseZimbabwe lunomthelela omubi esifundeni seNhlangano yamaZwe aseNingizimu ne-Afrika kakhulukazi eNingizimu Afrika. Simema wonke amazwe athanda uxolo kanye nomhlaba ukuthi beseke uhulumeni wobumbano ukufeza ukufukulwa komnotho. Sizoyeseka imizamo yesifunda seNhlangano yamaZwe aseNingizimu ne-Afrika ukuxazulula isimo kwelaseMadagascar.
Ngivumeleni, zimenywa ezihloniphekile, ukuthi ngincome Umbutho kaZwelonke waseNingizimu Afrika ngeqhaza elikhulu ekwakheni uxolo kulelizwekazi. Ngezinhlangano zezwekazi kanye nezesifunda sizosebenzela ukugxilisa intando yeningi kanye nokuhlonishwa kwamalungelo abantu ezwenikazi lase-Afrika. Sizofaka isandla ekuqiniseni ubudlelwano phakathi wamazwe aseNingizimu senze nezivumelwano ezizosihlomulisa namanye amazwe athile aseNingizimu.
Sizoqhubeka nokuphucula ubudlelwano namazwe athuthukile kubandakanya i-G8 kanye nozakwethu beNhlangano yamaZwe aseYurophu. Sizoqhubeka nokudlala indima ekwenzeni isiqiniseko ukuthi izingxoxo zeNhlangano yoMhlaba kwezoHwebo iDoha, ziyaphethwa.
Somlomo Ohloniphekile nosiHlalo,
INingizimu Afrika, njengezwe elomile idinga izinyathelo ezisheshayo ukugwema ukushintsha kwezemvelo okunomthelela omubi kakhulu nokuqinisekisa ukunikezwa kwamazi ezakhamizini zaseNingizimu Afrika.
Phakathi kwezinye izinhlelo, sizoqalisa ngeqhinga Lamanzi Okukhula Nokuthuthuka elizoqinisa ukuphathwa kwamanzi. Sizoqhubeka ukwenza ngcono ukusebenza kukagesi wethu kanye nokuthembela kugesi ophinde uvuseleleke. Malungu Ahloniphekile,
Izwe elisathuthuka lidinga ukwenziwa ngcono kwezidingo zabantu kanye nokuqiniswa kwezikhungo zentando yeningi. Sakhe iminyango emibili eHhovisini Likamongameli ukuqinisa kokubili ukuhlela ngamaqhinga nokuqapha kanye nokuhlola indlela okusetshenzwa ngayo.
Ukuqinisekisa ukufezwa kwezethembiso zethu, oNgqongqoshe beKhabhinethi bazophendula ngemisebenzi yabo kusetshenziswa amathuluzi okuhlola indlela osebenze ngayo, kusetshenziswa izinhloso kanye nalokho esizikalele ukuthi sikwenze, kusukela ngoNtulikazi.
Sizophinda sibandakanye Amabhizinisi Kahulumeni kanye neZikhungo Zezimali Yentuthuko ezinhlelweni zokuhlela zikahulumeni kanye nokwenza ngcono ukuqapha nokuhlola indlela abasebenza ngayo.
Malungu Ahloniphekile, zakhamizi zaseNingizimu Afrika,
Ukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlaka ezintathu, emakhaya, ezifundazweni kanye nakuzwelonke – ziphucula ukuhanjiswa kwezidingo, zizosheshisa ukwakhiwa kweSikhungo Esisodwa Sikahulumeni.
Lo hulumeni uzosiza ekubekeni abantu phambili ekuhanjisweni kwezidingo. Sizoqiniseka ukuzithoba kanye nokwenza umsebenzi ngendlela kubasebenzi abasezindaweni zokwamukela imiphakathi ekuhanjisweni kwezidingo kiyo yonke iminyango kahulumeni.
Lesi isikhathi sokuvuselela kabusha, sizokwenza uhulumeni oxoxisanayo futhi olalelanayo nabantu. Ukuhola ngesibonelo, umsebenzi usuqalile ekwakhiweni kwendawo yokuxhumana nomphakathi eHhovisini likaMongameli. Phezu kokwamukela izincwadi kanye nama-imeyili, sizokwakha inombolo yamahhala ukuze sitholakale kalula.
Abasebenzi bazobhekana nombuzo womphakathi ngamunye engathi iwona vo, ukuwungenisa umgudu nomgudu kuze kube ubhekwa ngendlela odinga ukuthi ubhekwe ngayo.
Somlomo Ohloniphekile kanye noSihlalo, Isikhungo Sikazwelonke Sokuthuthukiswa Kwentsha, esakhiwe ngokuhlanganisa Isikhwama seNtsha Umsobomvu kanye neKhomishana Yentsha Kazwelonke
sizothulwa mhla ziyi-16 kuNhlangulana Ekurhuleni. Izikhungo ziyahlanganiswa ukwenza ngcono amathuba okuthuthuka nawezidingo ezihanjiswa entsheni. Isikhungo sizoxhumanisa intsha engasebenzi eneziqu namathuba omnotho, ukuqinisa imizamo yokusabalalisa uHlelo Lukazwelonke Lokwakhela Intsha Imisebenzi kanye nokusekela osomabhizinisi abancane.
Somlomo Ohloniphekile kanye noSihlalo, zimenywa ezihloniphekile,
Ngenyanga ezayo, uMadiba wethu othandekayo uzohlanganisa iminyaka engama-91. Abantu emhlabeni wonke bazoqhubeka nokufuna ukuba khona kwakhe kanye nokuthi axazulule izinkinga zabo. Indlela aphila ngayo kanye nokuzinikela kwakhe ekusebenzeleni abantu isibonelo esihle emhlabeni wanamhlanje onezinkinga.
Umkhankaso womhlaba uqaliwe Inhlangano Yesikhwama sikaNelson Mandela kanye nezinhlangano ezisondelene nayo, obizwa ngoSuku lukaMandela, nokugoqa lokho utata amele khona.
Usuku lukaMandela luzogujwa mhla ziyi-18 kuNtulikazi unyaka ngamunye. Luzonikeza abantu baseNingizimu Afrika kanye nasemhlabeni jikelele ithuba lokwenza into enhle ukusiza abanye abantu.
UMadiba ubambe iqhaza kwezombusazwe iminyaka engama-67 kanti Ngosuku lukaMandela abantu emhlabeni wonke, emsebenzini, amakhaya kanye nasezikoleni, bocelwa ukuthi bachithe okungenani imizuzu engama-67 wesikhathi sabo benza into ewusizo emiphakathini yabo, kakhulukazi kulabo abahlwempu kakhulu.
Asisekele ngezinhliziyo zethu zonke Usuku lukaMandela futhi sigqugquzele umhlaba ukuthi usijoyine kulomkhankaso omuhle kangaka. Somlomo Ohloniphekile noSihlalo kanye Nezakhamizi zaseNingizimu Afrika,
Sithulele isizwe uhlelo lwethu lweminyaka emihlanu ezayo. Okuhambisana nokuzibophezela kwethu ngakunye sizokwenza iqhinga elinabile lohlelo, nezinto esizimisele ngokuzenza kanye nesikhathi sokuziqeda.
Lolu lwazi luzobe selutholakala emphakathini khona maduze nje. Impela njengabahlali bakuleli fanele sizifake imibuzo ngesikhathi esifanayo ukuthi yini thina esingazenzela yona ukusiza ukusekela uhlelo lukazwelonke. Ukuba isakhamizi akukhona ngamalungelo kuphela. Kungokuzimela kanye nokufaka isandla ukwenza izwe lethu elingcono. Silindele ukusebenza kahle futhi naMaqembu aphikisayo ePhalamende, ngomoya wokubeka izwe lethu phambili. Phezu kwalokho, uMadiba wasifundisa kahle ukuthi lelizwe elawo wonke umuntu, omnyama nomhlophe. Ukusebenzela ukubuyisana kanye nobumbano kuzohlala kubalulekile njengoba siqhubeka nohambo lwethu.
Njengoba ukuqaliswa kohlelo lwethu kuzokwenziwa ngaphansi komnotho ofadalele, kuzofanele sisebenze kokucophelela – ayikho imali ezomoshwa, ayikho ezodluliselwa enyakeni ozayo – isenti ngalinye fanele lisetshenziswe ngobuhlakani futhi kube nezithelo. Fanele sizisikele lokho okusilingene.
Zakhamizi zaseNingizimu Afrika, ngokusebenzisana singenza okuningi ukufeza umbono wethu ofanayo wesizwe esingcono futhi esinempumelelo!
Lokhu ukubambisana esicela kube khona.
Last Modified: Thu, 18 Jun 2009 11:28:43 SAST